အဘို့ပြင်ဆင်ခြင်းများနှင့်အကြံပြုချက်များ FSX cfg settings ကို
အဘို့ပြင်ဆင်ခြင်းများနှင့်အကြံပြုချက်များ FSX cfg settings ကို2နှစ်ပေါင်း5months ago #973
အသစ်ကမျှတည်ထားပါငါအတူတူသင့်ရဲ့ပျံ ပို. ပင်နေ့စွဲ (ငါသည်ပညာရှိ၏ဟုဂရစ်ဖစ်) မှတက်ပါစေအံ့သောငှါအခြို့သောပြုပြင်မှုများထားကြပြီ။ ပထမဆုံး
စိတျအပိုငျးသငျသညျအတွက်လိုအပ်သောအဓိကပြုပြင်မှုများအားငါပေးမည် FSX။ သငျသညျရှိပါက FSX Edition ကိုရေနွေးငွေ့သင်ဤပထမဦးဆုံးအပိုင်းလုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
(ဤပြုပြင်မှုများကို Quad Core ဒါမှမဟုတ်ပိုကောင်းတဲ့ CPU ကိုရဲ့နဲ့4၏နိမ့်ဆုံး RAM ကိုအရင်ဖျော်ဖြေသို့မဟုတ်ပိုကောင်းနှင့်အတူစနစ်များများအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်)
ပုဒ်မများထဲမှ: လူသိများ & လိုအပ်အပြောင်းအလဲများ
ပထမဦးစွာကျနော်တို့အဓိကဝင်ရောက်ဖို့လိုအပ် FSX config ကိုဖိုင် ( သငျသညျက hidden ဖိုင်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲကိုပြသပြတင်းပေါက်ခန့်ထားပြီသေချာအောင်လုပ်ပါ )
Start ကို / ကွန်ပျူတာ A / C ကို Select လုပ်ပါ: / Users / သင့်ရဲ့အမည်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာအမည် / Appdata / ရုန်းမင်း / Microsoft က / FSX
သင်ဖွင့်ပြီးတာနဲ့ FSX folder ကိုအဆိုပါနေရာချထား fsx.cfg သင့်ရဲ့ရန်သူက file များနှင့်ဖွင့်လှစ် notepad။ ဒါဟာဤကဲ့သို့သောကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်:
အသံ = 1
စစ်မှန်သော = InfoBrakesEnable
စစ်မှန်သော = InfoParkingBrakesEnable
စစ်မှန်သော = InfoPauseEnable
စစ်မှန်သော = InfoSlewEnable
စစ်မှန်သော = InfoStallEnable
စစ်မှန်သော = InfoOverspeedEnable
WideViewAspect = စစ်မှန်သော
အသုံးပြုသူ္တု = လေယာဉ်ပျံ, ရဟတ်ယာဉ်
SimObjectPaths.0 = SimObjects \_ လေယာဉ်
SimObjectPaths.3 = SimObjects \_ လှေ
SimObjectPaths.4 = SimObjects \_ တိရစ္ဆာန်များ
အကျယ်ချဲ့ = 1
တည်နေရာ = 421,0,1740,1036, \_\_ ။ \_ DISPLAY1
Mode ကို = 1920x1080x32
Controls_Default = နျ Standard
Controls_Current = နျ Standard
လတ္တီတွဒ် = 1,1
လောင်ဂျီတွဒ် = 1,2
အမြင့် = 1,3
ဦးတည် = 1,4
ဖလက်ပြကွက်အမြန်နှုန်း = 1,1
ဖလက်ပြကွက်အမြန်နှုန်း = 2,1
အခြေအနေကို = ကို C: \_ Users \_ Darrin \_ Documents ပျံသန်းမှု Simulator X ကို Files \_ 737 \_
SelectAircraftManufacturer = အားလုံး
SelectAircraftPublisher = အားလုံး
SelectAircraftType = အားလုံး
တိုင်းတာခြင်း = 0
အထွေထွေ = 0.000000
UnlimitedFuel = အယူမှား
TrueAirspeed = စစ်မှန်သော
AutoCoord = စစ်မှန်သော
RealMixture = အယူမှား
StressDamage = စစ်မှန်သော
GEffect = စစ်မှန်သော
ManualLights = အယူမှား
GyroDrift = အယူမှား
အယူမှား CrashWithDyn =
CrashDetection = စစ်မှန်သော
AutoTrim = အယူမှား
အယူမှား AllowEngineDamage =
STATE = အိုင်ဒါဟို
CITY = အမွှာရေတံခွန်
: D: \_FSX\_ gauge \_ Cessna.DLL.ortccozanotwarobnaqerloiorbuznahzlzzwcnl = 2
: D: \_FSX\_ gauge \_ Cessna172.DLL.naewwuikittlereqluuonlneoouooozhwobobcrz = 2
: D: \_FSX\_ gauge \_ Cessna182s.DLL.okttluckozcebonulharaezuuzqelekriuqoktqn = 2
: D: \_FSX\_ gauge \_ CessnaWAlpha.DLL.uwzrzqknbnziuoroqrwcawqqzzutqaqbwtacbnut = 2
: D: \_FSX\_ gauge \_ Bendix_King_Radio.DLL.ohiihwotoaienqbbhrtriacwlbweahnakwbzoqeq = 2
: D: \_FSX\_ gauge \_ Bell_206B.DLL.lwnkkonlzbbbubelirbaqntzrquotquahlqawetc = 2
: D: \_FSX\_ gauge \_ KingAir.DLL.eznhiwiiqzcrhnahwawoeiwueloarklwubhtkhto = 2
: D: \_FSX\_ gauge \_ FDSFX_01_gate.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
: D: \_FSX\_ gauge \_ FDSFX_02_airport.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
: D: \_FSX\_ gauge \_ FDSFX_03_muzak1.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
: D: \_FSX\_ gauge \_ FDSFX_04_muzak2.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
: D: \_FSX\_ gauge \_ FDSFX_05_muzak3.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
: D: \_FSX\_ gauge \_ FDSFX_06_turbulence on.GAU.bcinqoaarbwutthknnhtqauewekaekubiibzcncu = 2
: D: \_FSX\_ gauge \_ FDSFX_07_turbulence off.GAU.bcinqoaarbwutthknnhtqauewekaekubiibzcncu = 2
: D: \_FSX\_ gauge \_ FDSFX_08_gate departure.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
: D: \_FSX\_ gauge \_ FDSFX_09_pushback.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
: D: \_FSX\_ gauge \_ FDSFX_10_safety message.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
: D: \_FSX\_ gauge \_ FDSFX_11_safety video.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
: D: \_FSX\_ gauge \_ FDSFX_12_takeoff.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
: D: \_FSX\_ gauge \_ FDSFX_13_climb.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
: D: \_FSX\_ gauge \_ FDSFX_14_cruise.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
: D: \_FSX\_ gauge \_ FDSFX_15_meal service.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
: D: \_FSX\_ gauge \_ FDSFX_16_movie.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
: D: \_FSX\_ gauge \_ FDSFX_17_begin descent.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
: D: \_FSX\_ gauge \_ FDSFX_18_on approach.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
: D: \_FSX\_ gauge \_ FDSFX_19_on final.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
: D: \_FSX\_ gauge \_ FDSFX_20_taxi gate.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba =2မှ
: D: \_FSX\_ gauge \_ FDSFX_21_gate arrival.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
: D: \_FSX\_ gauge \_ RKG_speed.GAU.orrqnqbllqeioklarhwiooreqhihuwkzohbcnown = 2
: D: \_FSX\_ gauge \_ RKG_Fuelstat.GAU.btqcbehkrbuztkazkrazcahuiarnakkairnnwkci = 2
: D: \_FSX\_ gauge \_ 737-400.DLL.rtrtoezzwweweowewheiheeeukzblbeckzrlzuqw = 2
: D: \_FSX\_ gauge \_ Mooney_Bravo.DLL.kbzroatzbklthieauthlzqzchutqhiiczebcwbuc = 2
: D: \_FSX\_ gauge \_ GPWS_Sound.GAU.aqrreuwiutqzttebzkrqncewurhnactlnwktwrbi = 2
: D: \_FSX\_ gauge \_ ညှစ်သံမြည် brakes_Sound.GAU.aqrreuwiutqzttebzkrqncewurhnactlnwktwrbi = 2
: D: \_FSX\_ gauge \_ DSD_FSX_XML_Sound.GAU.bzlabaleluiiqequhotbbtuwbznoabaqhizrukuc = 2
ကျနော်တို့ Display ကိုအပိုင်းစတင်ပါလိမ့်မယ်။ သင်တစ်ဦး LCD ကို Monitor သို့မဟုတ်မည်သည့်မြင်ကွင်းကျယ်ဖန်သားပြင်ကိုအသုံးပြုနေလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါ [Display ကို] Section မှာတည်ရှိပါတယ်ပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုပေမည်။
WideViewAspect = အယူမှား
၏အလွန်အောက်ခြေတွင် [graphics] အပိုင်းအောက်ပါ add:
အဆိုပါ HIGHMEMFIX = 1 ကခွင့်ပြုကြောင်းအတွက်အရေးအပါဆုံးဖြစ်ပါတယ် FSX သင်အသုံးပြုနေလျှင် VAS (Virtual Address Space) တွင် tp4gig လုပ်ရန် add-on ရှုခင်းနှင့်လေယာဉ်ပျံသို့မဟုတ်ရှိသည်
autogen နှင့်လက်ျာရန်ခဲယဉ်းသည်အခြားခြင်းလျှော။ သင့်ရဲ့ config ဖိုင်ထဲတွင်ဤသည်ကဆက်ပြောသည်လိုင်း OOM ရဲ့ (တားဆီးကူညီပေးပါမည် မှတ်ဉာဏ်အမှားများထဲက ) တွင်ဘုံများမှာဘယ် FSX။ အဆိုပါရေနွေးငွေ့
Edition ကိုပြီးသားကို default အားဖြင့်သင်တို့အဘို့ဤပြောင်းလဲမှုပါဝင်သည်။
ငါသည်လည်းသင်တို့ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်အကြံပြု Process Explorer at www.sysinternals.com ။ ဒီ tool ကလေယာဉ်ခရီးစဉ်အတွက်နေချိန်မှာသင် vas useage စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်နားလည်ကူညီပေးပါမည်
ဒါကြောင့်သင်ဘယ်လိုမြင်နိုင်ပါသည် FSX သင်၏ system အရင်းအမြစ်များကို manageing ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာရိုးရှင်းစွာအဖြစ်စာရင်းဝင်ပါလိမ့်မည် VS ( ကို virtual အာကာသ ) ကိုလည်းသင်အဖြစ်ကောင်းစွာ CPU နဲ့ RAM ကိုအသုံးပြုမှုကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုနားလည်ခြင်းသငျသညျကို set up ကူညီပေးပါမည် FSX သင့်ရဲ့နောက်ဆုံးချဉ်းကပ်မှုအပေါ်တစ်ဦး 10 နာရီလေယာဉ်ခရီးစဉ်အပြီးဖြစ်ပျက်ကြောင်းကွော OOM မပါဘဲရှည်လျားသောလေယာဉ်ခရီးစဉ်များအတွက်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်လေယာဉ်ခရီးစဉ် Simulator ကိုတစ် 64 bit ဗားရှင်းကြည့်ဖို့စိတ်အားထက်သန်သူဖြစ်ရမည်ထိုအခါမူကား vas ၏4အရင်ဖျော်ဖြေကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်သည်အထိလုပ်မယ့်ခဲ့ကြသည်။
ထို့အပြင်အောက်မှာ ခ] graphics [/ ခ အပိုင်းအောက်ပါလိုင်းသည်:
2048 သို့မဟုတ် 4096 သို့ပြောင်းမည်
ပုံမှန်အားဖြင့် FSX High Definition မဟုတ်သောအရာဟာ standard အဖြစ် 1024 ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။ သင်အမှန်တကယ်သင့်ရဲ့ widscreen Monitor ပေါ်မှာကို HD graphics ကိုဤနည်းကိုခံစားလို့မရပါဘူး။ တချို့ကလေယာဉ်တင်သငျသညျ
သငျသညျ 4096 ဟုသတ်မှတ်ဒီမျဉ်းများမဟုတ်လျှင် (payware) ကို download လုပ်ပါကအလားအလာင်မပြပါလိမ့်မယ်။ နောက်တကြိမ်ရေနွေးငွေ့ Edition ကိုပြီးသား default အနေဖြင့် 4096 မှ preset ဖြစ်ပါတယ်။ သင်လုပ်နိုင်သည်
ထို့အပြင်နေဆဲ HD ကိုဖြစ်သည့် 2048 စမ်းပါ။ ဒါဟာသင် fps (တစ်စက္ကန့်ဘောင်) အပေါ်မူတည်လိမ့်မယ် မှတ်ချက်: သင်သည်သင်၏ setting များကိုပြောင်းလဲပစ်ခဲ့လျှင် (slider) တွင် FSX သင်သည်ဤတဦးတည်းလိုင်း reset ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်
က 1024 default ပြန်သွားလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
အထက်ပါအထွေထွေစည်းမျဉ်းဖြစ်ကြသည်။ သင်စတင်သင့်တယ် FSX အပြောင်းအလဲများကိုအထက်3အောင်ပြီးနောက်နှငျ့သငျပုံမှန်ပျံသန်းဧရိယာကျော်တိုတောင်းတဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကို run ။ ငါသည်သင်တို့ကိုတစ်ဦးကိုသတိပြုမိပါလိမ့်မယ်ကိုသိ
ပုဒ်မ 2: မှုန်ဝါးရှုခင်းယေဘုယျပြင်ဆင်ခြင်းများ။
ငါသည်သင်တို့ကို run အောက်ပါအပြောင်းအလဲများကိုတစ်ခုချင်းစီပြီးနောက်အကြံပြု FSX သငျသညျ fps နှင့်အတူကိစ္စများရှိပါကဒါကြောင့်သင်ရုံ program ကိုပိတ်လိုက်နိုင်ပြီးနောက်ကျောက default ဖို့လိုင်းပြန်စပါ။ ဒါဟာတကယ်
သငျသညျအပြေးကြသည်စနစ်ပေါ်တွင်မူတည်သည် FSX ပေါ်မှာ။ ငါ Firewire အတွက် running 8 မြင့်မားသော def ဂရပ်ဖစ်ကတ်များနှင့်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် RAM ကို2အရင်ဖျော်ဖြေနှင့်အတူတစ် 16 Core Processor ကိုရှိသည်။
Tweak #1 - Fiber Frame ကအစိတ်အပိုင်း
အဆိုပါမှုန်ဝါး၏ဤအကြောင်းမရှိလျှော့ချရန် Microsoft ကလေယာဉ် Simulator X ကို Scheduler အတွက်နောက်ခံတာဝန်များကိုဦးစားပေးပုံကိုအခုမှသိရပါတယ် FSX။ အခုတော့ပိုပြီး CPU ကိုအချိန်ဖြစ်ပါသည်
အတန်ငယ်နိမ့်ဘောင်နှုန်းထားများ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာမြေပြင်အနေအထားဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအပါအဝင်တင်ရှုခင်းဒေတာ, မှမြှုပ်နှံ။ ကျနော့်အမြင်တွင်ဤပြောင်းလဲမှုကိုအများစု၏ဤအကြောင်းမရှိဖြေရှင်းထားပါတယ်
အဆိုပါမှုန်ဝါးခြင်း, ရှုခင်း loader မှနေဆဲ (10 မိုင်ထက်ပိုမြန်) (600 fps ထက်နည်း) အလွန်အမင်းနိမ့်ဘောင်နှုန်းထားများမှာသို့မဟုတ်အလွန်အစာရှောင်ခြင်းလေကြောင်းအမြန်နှုန်းမှာနောက်ကွယ်မှရနိုင်ပေမယ့်။ ရှိပါတယ်
CPU ကိုအချိန် FS တင်ရှုခင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမှခုထဲကဘယ်လောက်ထိန်းညှိဖို့နည်းလမ်းများစွာ။ အလွယ်ဆုံးနည်းကတော့သင့်တဲ့တန်ဖိုးပစ်မှတ် frame rate ကို slider ကိုသတ်မှတ်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်
စက်တသမတ်တည်းအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ သင် slider ကိုသတ်မှတ်အနိမ့်, ပိုမို CPU ကိုအချိန်တင် data ကိုမှ rendering များမှပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျလုပျနိုငျနောက်ထပ်အရာတို့သည်ပြုပြင်မွမ်းမံဖို့ဖြစ်တယ်
variable ကိုအတွက်အောက်ပါ FSX.CFG:
FIBER_FRAME_TIME_FRACTION ကျနော်တို့မူလတန်းချည်ပေါ်ဖိုင်ဘာအလုပ်အကိုင်များကို run လိမ့်မည်ဟုဘောင်နှုန်းအချိန်အများဆုံးပမာဏကိုဆုံးဖြတ်သည်။ ကျနော်တို့ကတူအောင်ဖန်တီးနှင့်ဆပ်ထို့နောက်အမျှင်ကို run ဖို့ဘယ်လိုရှည်လျားဆုံးဖြတ်ရန် FIBER_FRAME_TIME_FRACTION ကြောင့်အချိန်များပြားယူအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးတိုင်းတာ။ ကတူအောင်ဖန်တီးနှင့်ဆပ်မှ 10 မီလီစက္ကန် ယူ. FIBER_FRAME_TIME_FRACTION 0.33 ၏ပုံသေတန်ဖိုးသတ်မှတ်ထားခဲ့သည်ဆိုပါကဥပမာ, ပြီးတော့ကျနော်တို့အဓိကချည်ပေါ်အမျှင် 10 * 0.33 = 3.3 မီလီစက္ကန်မှတက်ဘို့ကို run ဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မယ်။ 1.0 နှင့် 2.0 ၏အစိတ်အပိုင်းတန်ဖိုးများအဘို့, အမျှင်အားအချိန်အသီးသီး 10 မီလီစက္ကန်နှင့် 20 မီလီစက္ကန်ပါလိမ့်မယ်။
FIBER_FRAME_TIME_FRACTION = ဎ
[n = 0.01 - 0.99] ကို Quad Core ဒါမှမဟုတ်ပိုကောင်းတဲ့စနစ်များသည် 0.70 ကြိုးစားကြ
ပေါင်းစုံ core ကိုစက်များအတွက်ကအထက်မလိုအပ်ကြောင်းဆိုပါတယ်ခဲ့ပြီးကို default 0.33 သည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထုတ်ကြိုးစားခဲ့ကအမှန်ပင်သတ္တုတွင်းကူညီပေးခဲ့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တိုင်းစနစ်ကဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲပေါင်းစပ်နှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏တစ်ဦးချင်းစီ system ပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်သောအပြင်အဆင်များနှင့်အတူပတ်ပတ်လည် fiddle ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤမျှလောက်များစွာသောအချက်များသက်ဆိုင်ပါသည်။ ငါတစ်ဦးတည်းစာအုပ်အားလုံးဖြေရှင်းချက်ကိုက်ညီပေမယ့်မရှိလည်းမရှိဟုပြောနိုင်ကြောင်းအလိုရှိ၏။ သငျသညျယခုသင့် system ပေါ်တွင် FPS (တစ်စက္ကန့်ဘောင်) နဲ့ကိစ္စများရှိခြင်းနေတယ်ဆိုရင်သင်က tweaking start မဖြစ်မှီငါသည်သင့်စက်ကိုတစ်သမတ်တည်းပြေးခြင်းနှင့်ထိုအရပ်၌သူတို့ကိုစောင့်ရှောက်သည်အဘယ်မှာရှိဧရိယာမှလျှော setting များကပထမဦးဆုံးပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ သိပ်သည်းရှုခင်းကျော်သင့်ရဲ့စက်ကိုစမ်းသပ်နှင့် 20 fps ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ။ သငျသညျယာယီန့်အသတ်နှင့်ပြေးဖို့ fps Limited သတ်မှတ်နိုင်သည် FSX ကလှမ်းရဲ့အမှတဆင့်, ထို့နောက်သင်တစ်ဦးအမာခံရုံပျံသန်း Simulator ကိုများအတွက်ကွန်ပျူတာခွငျးပြီးတော့မျှတည်ထားပါဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင် (တစ်ဝက်နှုန်းသို့မဟုတ်သင့်မော်နီတာနှုန်းကို refresh) ကျော 30fps က reset သွားကြဖို့လမ်းဖြစ်၏။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စနစ်ကကိုတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်အများကြီးရဲ့ $$$ ၏ကယ်တင်မည်။
ထဲမှာ ခ] မြေပြင်အနေအထား [/ ခ အပိုင်းအောက်ပါဖြစ်ပါသည်:
6.500000 မှတက် 7.500000 သို့ပြောင်းမည်
အထက်ပါ setting ကိုအကွာအဝေးဆုံးဖြတ်သည် FSX ရှုခင်း (ပြတ်သား) ထုတ်ဆွဲယူခြင်းနှင့် TIME_FRAME_TIME_FRACTION နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ဒီမျဉ်းပြောင်းခြင်းဝေးကွာလေယာဉ်ကနေအာရုံကိုတိုးမြှင့်စေမည်။ (ကလည်းသင့်ရဲ့ vas အသုံးပြုမှုကိုအနည်းငယ်တိုးပွါးလိမ့်မည်မှတ်ချက်)
အဆိုပါ [မြေမျက်နှာသွင်ပြင်] Section မှာ
ဒီ DETAIL_TEXTURE = 1 သတ်မှတ်ထားသေချာအောင်လုပ်ပါ
ဤဓာတ်ပုံရှုခင်းအသုံးပြုသူများအနေနဲ့ချက်ချင်းအကျိုးကျေးဇူးရလိမ့်မည်။ သငျသညျကိုဆင်းရှာဖွေနေလေထုထဲတွင်မြေပြင်အဆင့်မှာမြက်ခင်းပြင်ပေါ်တွင်တစ်အများကြီးပိုကောင်း texture နှင့်ယေဘုယျမျက်စိသကြားလုံးအတွက်ကျယ်ပြန့်တိုးတက်မှုမြင်လိမ့်မည်။
ပုဒ်မ 3: ချွတ်ဝန်ယူကူညီပေးခြင်း FSX။ သင်သည်သင်၏ HD ကိုဂရပ်ဖစ်ကဒ်သင့် CPU ၏လုပျငနျးအချို့ကိုပြုပါရှိခြင်းအားဖြင့်နောက်ထပ်သင့်ရဲ့ဂရပ်ဖစ်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
နောက်ဗီဒီယိုပျံသန်းမှု Sim စွဲနေသူအဖြစ်ကောင်းစွာအများအပြားပြုပြင်မှုများသိတယ်။ ငါသူလည်း Rex အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်ထင်ပါတယ်။
ငါ Megascenery နှင့် Blue Sky ကအများကြီးကိုအသုံးပြုပါ။ ကျွန်မထံအပ်နှံတစ်2တီဘီ, HD ရှိအဘယ်ကြောင့်ဤသူကားအ FSX။ ငါ autogen စိုးရိမ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးနေစဉ်ကပြတ်သားမှကြွလာသောအခါ, ဓါတ်ပုံရှုခင်းအနိမ့်အဆင့်ကိုလေယာဉ်ခရီးစဉ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ငါအထက်တွင်အပြောင်းအလဲ 500 ပေထိုကြောင့်ငါ့ takeoff နှင့်မြေယာပိုပြီးလက်တွေ့ကျကျအောင်မှာပြတ်သားတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
10 fps သင်ပျံတဲ့တစ် truer ပုံဖော်တင်ဆက်ဖော်ပြခြင်းမတိုးမြှင့်နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမ autogen နှင့်အတူဓာတ်ပုံကိုရှုခင်းဖို့အဓိကအားသာချက်ပိုကောင်း vas အသုံးပြုမှုတစ်လျှောက်တွင်စီမံခန့်ခွဲဖြစ်သည်။ အမြဲပဲ ပို. ပို. လိုအပ်ပေမယ့်အမြဲစစ်မှန်တဲ့ 64 နည်းနည်းပလက်ဖောင်းပြန်လွတ်လာသည်အထိအစီအစဉ်ကိုပျက်ကျတားဆီးဖို့ဟန်ချက်ညီလုပ်ရပ်ရှိလိမ့်မည်သူကိုမျှတည်ထားပါရှိပါတယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့စက်၏အကောင်းတစ်ဦးနားလည်မှုနှင့်အတူပညာရှိတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်၌ရှည်လျားသောလမ်းကိုသွားပါလိမ့်မယ် FSX ပျော်စရာနှင့်တည်ငြိမ်ပလက်ဖောင်း။
ငါသည်ဤစွမ်းဆောင်မှုနှင့်ကြောင့်ထဲမှာသင့်ကိုကူညီပေးပါလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် FSX ခေတ်မီအစီအစဉ်၏ပို။